कांग्रेसको वडासभापति १९ वर्षकी स्वस्तिकालाई विश्वप्रकाशको यस्तो संदश सहितको बधाई । – Ap Nepal
कांग्रेसको वडासभापति १९ वर्षकी स्वस्तिकालाई विश्वप्रकाशको यस्तो संदश सहितको बधाई ।
September 5, 2021 380
अहिले चर्चामा छिन् स्वस्तिका महत। नेपाली कांग्रेसको शुक्रबार सम्पन्न वडाअधिवेशनबाट सभापति बनेकी स्वस्तिकालाई बधाई दिनेहरूको भीड छ। उनकै विषयमा सामाजिक सञ्जाल तातेको छ।
उमेरले १९ वर्षीया स्वस्तिका महत दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर–३ मा सभापति चयन भएकी छिन्। उनी स्वास्थ्य सहायक एचए अध्ययनरत छात्रा हुन्।
पारिवारिक पृष्ठभूमिले पनि उनलाई राजनीतिमा आउन प्रेरित गरेको हो। स्वस्तिकाका बुवा भुपेन्द्रजङ महत कांग्रेस दैलेखमा अघिल्लो कार्यकालमा उपसभापति भएका थिए।
नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वजिल्ला सभापति, नेपाल तरुण दलका जिल्ला कार्यसमितिका सभापति भइसकेका थिए। उनी एक कार्यकाल पार्टीको कोषाध्यक्ष समेत बनिसकेका थिए।
तर, डेढ वर्ष पहिले भारतको मुम्बईमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो। स्वस्तिकाका पिता नेविसंघ र तरुण दलमा हुँदा शेरबहादुर देउवा निकट थिए।
स्वस्तिकाले पनि आफ्ना पिताको सपना पूरा गर्नकै लागि राजनीतिमा आएको बताएकी छिन्। ‘म मेरा बुवाको सपना पूरा गर्नकै लागि राजनीतिमा आएकी हुँ, मेरा बुवाले दैलेखमा राजनीति गरेर समाज परिवर्तन गर्ने सपना देख्नुभएको थियो, उहाँको सपना पूरा गर्न म राजनीतिमा होमिएकी हुँ,’ स्वस्तिकाले भनिन्।
नेपाली कांग्रेसमा व्याप्त गुटबन्दीबारे स्वस्तिकालाई कुनै चासो छैन। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आ–आफ्ना गुट चलाउन व्यस्त रहँदा स्वस्तिकालाई त्यसबारे चासो छैन। ‘गुट–उपगुटको बारेमा मलाई केही थाहा छैन, म विस्तारै राजनीति गर्दै जान्छु,’ उनले भनिन्।
नेपाली कांग्रेसको विरासतअनुसार आफ्ना वडाबासीको सपना पूरा गर्नका लागि आफू राजनीतिमा होमिएको उनको धारणा छ। ‘राजनीति नै सबै नीतिको मूल नीति हो भनेर मेरो बाबाले मलाई भन्नुभएको थियो । त्यहि अनुसार राजनीतिक यात्रा गरेर मात्रै म गाँउको सेवा गर्न सक्छु भनेर यहाँ लागेकी हुँ,’ उनले भनिन्।
स्वस्तिकासँगै दश जना उम्मेदवार उक्त वडामा थिए। ‘तर, अन्य प्रतिस्पर्धी पनि हुनुहुन्थ्यो, मैले सबैलाई कन्भिन्स गरें, सबैले मलाई सभापतिमा अवसर दिनुभयो,’ उनले भनिन्।- नेपालसंदेशबेट।
Prevकिन डराइन् हिना खान ? सिद्धार्थको अन्तिम संस्कारमा समेत जान सकिनन् यस्तो भनिन् हेर्नुस्
Nextआजकाल किन जवानी अवस्थामै हृदयघातको शिकार भइरहेकाछन् युवाहरु ? यस्ता कारणहरु हेर्नुहोस्…
कोरोना महामारीबीच प्रतिनिधिसभा बिघटन बि, रुद्ध नेविसंघले निकाल्यो मसाल जुलुस (भिडियो सहित)